अप्रिल २०१ - - नेटवर्क रेडियो
घर / 2018 / अप्रिल
नयाँ रेडियो ...
मैले यस सम्पूर्ण नेटवर्क रेडियो घटनामा प्रवेश गरेदेखि नै मेरो मुख्य उपकरण भएको छ टकपड N58.
यो सायद बिक्री को दृष्टिकोण बाट सबैभन्दा लोकप्रिय रेडियो होईन - को Inrico T320 अहिले अहिले ठूलो विक्रेता जस्तो देखिन्छ (र हो मसँग ती पनि एक हो, र एक Inrico TM-7!)
तर मसँग कुराकानी को लागी एक धेरै नरम स्थान छ।
सबैभन्दा पहिले, निर्माण गुण निश्चित नै मैले अहिले सम्म कुनै पनि नेटवर्क रेडियोमा अनुभव गरेको उत्तम हो। यो गम्भीर छ भन्नको लागि वास्तवमै एक महत्वहीन कुरा हो - म कहिल्यै कडा कडा रेडियोको स्वामित्व लिएको छैन!
दोस्रो, हातमा फिट अनुकरणीय छ - जस्तो एचटीले महसुस गर्नुपर्दछ, मेरो रायमा।
तेस्रो, अडियो विश्वास गर्न सुन्नु पर्छ! जब मैले हालै मेरो स्थानीय क्लबमा नेटवर्क रेडियोमा प्रस्तुतीकरण गरें, सानो टकपडको अडियोले ठूलो क्लब कोठा पूर्ण रूपमा भर्‍यो - र यो समयमा पूर्ण मात्रामा पनि थिएन। बाहिर यो अविश्वसनीय छ!
जे होस्, कुराकपड २०१ 2017 को एकदमै अन्तमा बजारमा लगियो, र प्राय जसो "कम्प्युटर" को रूपमा हुन्छ, फर्मवेयर प्रक्षेपणमा थोरै "थ्रेडबेयर" थियो।
म Android को पुरानो संस्करण र सीमित मेमोरी लाई माफ गर्न सक्छ किनकि ती रेडियोको एक jot को साथ मेरो प्रयोग को प्रभाव गर्दैन। मलाई चाहिएको सबै अनुप्रयोगहरूको लागि अझै धेरै मेमोरी रहेको छ र तिनीहरू एन्ड्रोइड किटक्याट अन्तर्गत अपेक्षित रूपमा कार्य गर्दछन्। मलाई अर्को दोस्रो सिम कार्ड वा SD कार्ड चाहिएको छैन वा हैन।
चीजहरू जुन मसँग समस्या थिए त्यो अधिकतर विषेशताहरू जस्तै घडीले गलत समयको बारेमा रिपोर्ट गरेको थियो जबसम्म मैले रिसेट गरेन। ब्याट्री प्रतिशत १% भनेको जब मलाई थाहा थियो कि वास्तवमै सम्भव छैन! के हुँदैछ भनेर थाहा नभए जब मलाई लाग्यो कि मैले रेडियो "बन्द" गरें। कष्टप्रद बरु मुद्दाहरु भन्दा रेडियो को उपयोग परेशान।
केवल प्रमुख मुद्दा भोल्युम कन्ट्रोल थियो, जुन सकरात्मक ढ loud्गले भए पनि, कहिलेकाँही वास्तवमा अधिक "गुप्त" प्रयोगको लागि पर्याप्त कम जान सक्दैन।
मसँग अब "नयाँ रेडियो" छ!
कुराकानीसँग, केहि दिन अघि जारी गरिएको एक नयाँ फर्मवेयर (EU) र नयाँ फर्मवेयर (अमेरिका) जसले ती धेरै धेरै निगलहरू सम्बोधन गरेको देखिन्छ।
पूर्ण रूपमा निष्पक्ष हुनको लागि, टकपडले जनवरीदेखि केही फर्मवेयरहरू जारी गरिसकेका छन् तर पछिल्लो भन्दा बढि समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेको जस्तो देखिन्छ।
त्यसोभए के नयाँ छ?
धेरै नयाँ सामानहरू सम्भवतः "हुड मुनि" अपडेटहरू हुन्, तर त्यहाँ केहि देखिने (श्रव्य?) भिन्नताहरू छन्।
तपाईं वास्तवमा सक्नुहुन्न प्रदर्शन ब्याट्री प्रतिशत अब, जुन यो मुद्दालाई सुल्झाउने एक तरिका हो - सायद सही प्रतिशत मिटरले भविष्यमा फर्कने छ?
जब तपाईं अब युनिट अफ गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई बताउनुभन्दा बमोजिम हवाइजहाज मोडमा जानुको सट्टा, यसले तपाईंलाई धेरै उपयोगी विकल्प प्रदान गर्दछ कि त या त हवाईजहाज मोडमा जानको लागि वा पूर्णतया बिजुली बन्द गर्नको लागि, जुन धेरै उपयोगी र प्रयोगकर्ता मैत्री हो।
भोल्यूम कन्ट्रोल धेरै सुधारिएको छ, यद्यपि यसले अझै पनि मेरो रुचि को लागी कम भोल्युममा केहि अधिक नियन्त्रणको साथ गर्न सक्दछ। जहाँसम्म, यो इन्जिनियरि menu मेनूमा "ट्याक" गर्न सकिन्छ, जुन धेरै वेबसाइटमा वर्णन गरिएको छ - यद्यपि त्यस लेखमा दिइएका मानहरू निश्चित रूपमा प्रयोग गर्न लायक छन् (वास्तविक ह्याम परम्परामा!)
मिडिया भोल्युम नियन्त्रण गर्न बटन म्यापर सफ्टवेयरको सशुल्क संस्करण प्रयोग गर्न यो उपयोगी सल्लाह हो। एन्ड्रोइडसँग or वा different फरक भोल्युम नियन्त्रणहरू छन् जस्तो देखिन्छ, जसमध्ये केवल एक रेडियोमा परम्परागत खण्डको लागि हो - बटन म्यापरले मलाई सँधै भौतिक नोबमा म्याप गरिएको "मिडिया" भोल्युम नियन्त्रण प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
अझै पनि प्रेम मा?
सबैमा मँ अझै पनि मेरो कुराकानी मनपराउँछु - यकीनन यो अन्य नेटवर्क रेडियोको रूपमा फोनको रूपमा प्रयोग गर्न यति सजिलो छैन, किनकि यसमा कुनै कीप्याड छैन (यद्यपि यो अझै पनि टच स्क्रिनको साथ काम गर्दछ), तर मेरो प्रयोग केसको लागि, जुन यो हो रेडियो जस्तो HT, यो उत्तम छ!
यो धेरै लामो समय को लागी मेरो झिल्ली छोड्ने छैन। यहाँ अर्को "नयाँ रेडियो" एक महिना वा दुई समयमा छ। म आशा गर्दछु तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ, कुराकानी!
© अप्रिल २०१।
प्रकाशित अप्रिल 25, 2018 अप्रिल 26, 2018
के रेडियो एमेच्योर बनाउँछ?
अर्को दिन मेरो सबैभन्दा राम्रो हाम साथीहरूसँग मैले जीवन्त कुराकानी गरें - र यसले मलाई फेरि सोच्न लगायो ... (सँधै खतरनाक कुरा!)
यो ह्याम रेडियो होईन!
हामी नेटवर्क रेडियोको बारेमा एउटा ठुलो कुरा गर्ने बिन्दुमा छलफल गर्दै थियौं; समस्या यस्तो देखिन्छ कि केहि मानिसहरूलाई दिनुहोस् जुन उनीहरू आफैंमा एमेच्योर ब्यान्डमा आरएफ उत्पन्न गर्दैनन्।
मेरो साथीले बहस गरिरहेको थियो कि नेटवर्क रेडियोको प्रयोग एमेच्योर रेडियो थिएन, यद्यपि जब उसले आईआरएन पहुँच गर्ने त्यस्ता उपकरणहरू र इकोलिंकमार्फत आरएफ लिंकमा बाहिर आउने संकेतहरूको बारेमा कुरा गर्दा उनी खुशी भए कि त्यो त्यतिबेला हाम रेडियो हुन सक्छ, कम्तिमा। , किनभने कसैको आवाज आउँनेछ, उदाहरणको लागि, एक एमेच्योर कहीँ रिपीटर।
उसको लागि भने, IRN बाट IRN वा Zello to Zello पक्कै थियो “छैन ह्याम रेडियो "किनकि एक एमेच्योर ब्यान्डमा कुनै आरएफ उत्पन्न गरिएको थिएन।
म पूर्ण रूपमा यो तर्क प्राप्त गर्दछु - यो असम्भव छ कि नेटवर्क रेडियोले प्रत्यक्ष रूपमा "Ham RF" उत्पन्न गर्दैन वा हेम ब्यान्डमा सिधा कार्य गर्दैन।
तर मलाई लाग्छ कि यो यहाँ मात्र समस्या छैन, किनकि म एक क्षणमा आउनेछु ...
तपाई एमेच्योर हुनुहुन्न जबसम्म… के
यद्यपि उसले अझै अगाडि बढायो र तर्क गर्‍यो कि तपाईं वास्तवमा हम हुनुहुन्न जबसम्म तपाईं "हाम" हुनुहुन्न प्रसारण गर्दै ह्याम ब्यान्डमा
उसको तर्क यो हो कि यदि तपाइँ सीबी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ एक "सीबी-एर" हुनुहुन्छ र यदि तपाइँ जेलो प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाइँ एक "ज़ेलो-एर" हुनुहुन्छ र यी कुनै पनि एमेच्योर रेडियोको कुनै पनि रूप छैन।
फेरि म पूरै यो बुझ्दछु, तर फेरि मेरो लागि यो पूर्ण रूपमा समात्दैन।
मलाई लाग्छ किन चीजहरू परिवर्तन भएको छ हेरौं।
ह्याम रेडियोको अधिकतर ईतिहासको लागि, यो प्रस्ट थियो कि ह्याम्सले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रममा मात्र आवंटित ब्यान्डहरू प्रयोग गर्थे। यो केही अंश हो किनकि ती प्रायोगिक उद्देश्यका लागि सरकारहरूले हामीलाई दिएका थिए र स्पष्टसँग, त्यहि थियो।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, ईतिहासको माध्यमबाट धेरै हेमहरू खास गरी सबै सञ्चालनमा रुचि राख्दैनन् - उनीहरूको मुख्य चासो सर्किट डिजाइन र / वा निर्माण हुन सक्छ।
तिनीहरू केवल कहिले हावामा आए जब तिनीहरू समावेश भएको केहि परीक्षण गर्दै थिए भएको प्रसारण गर्न र ब्यान्डको छनोटको उनीहरूमा थोरै अर्थ हुन सक्छ। उनीहरू सत्यमा शर्टवेभ स्पेक्ट्रममा कहिँ पनि हुन सक्थे, तर स्पष्ट कारणका लागि आवंटित ह्याम ब्यान्डमा अडिनुपर्‍यो।
अरूहरू एन्टेना डिजाइनमा हुनसक्दछन् - र फेरी मात्र एमेच्योर ब्यान्डमा सान्दर्भिक हवाई परीक्षणहरू गर्न आएका थिए।
तर म श doubt्का गर्दछु कि यी कुनै पनि शौकवादीले आफूलाई वास्तवमै हम्स जस्तो देखेनन् कि उनीहरू वास्तवमा वास्तवमै प्रसारित आरएफ…
अनि कलसाइनहरू के गर्ने?
हाम्रो कलिंग्स हम्सको रूपमा हाम्रो पहिचानको धेरै अंश हो।
बरु अनौठो रूपमा, म आफूलाई G7DDN को रूपमा देख्छु कि म धुँदैछु, मेरो कार चलाउँदै छु, वा छुट्टीमा - यो लगभग "म को हुँ" को एक हिस्सा हो। यो अनौंठो कुरा हो कि सरकारले बाँडफाँड गर्ने पहिचानकर्ताले हामीमा यो प्रभाव पार्न सक्छ!
कुरालाई अझ नराम्रो बनाउनको लागि, मलाई मेरो हेम मित्रहरू र क्लब सदस्यहरू द्वारा "DDN" पनि भनिन्छ - म अन्य क्लबका सदस्यहरूलाई पनि उनीहरूको प्रत्यय द्वारा कल गर्छु! माथिको मेरो बहस गर्ने साथीले आफ्ना सबै साथीहरूलाई बोलाउँदछन् (ती सबै राम्रा हुन्!) उनीहरूको प्रत्ययबाट।
किन? किनभने मान्छे को रूप मा हाम्रो धेरै पहिचान हो, आंशिक रूपमा, हाम्रो कलइनमा समेटिएको छ, हामी विशेष रूपमा "एमेच्योर आरएफ उत्पन्न नगरे पनि"।
२१ औं शताब्दीमा ...
१ 1990 XNUMX ० को दशकमा जब इन्टरनेट ह्याम दृश्यमा आइपुग्दछ अब यो रोचक हुन्छ।
अचानक हामीसँग नयाँ प्रकारको प्रचार र पुनरुद्धार छ, धेरै वर्ष पछि, अति नै शब्द "वायरलेस"। तर यो अब हेम्सको लागि विशेष छैन।
जो कोहीले पनि यो छोटो दूरीको वायरलेस रेडियो प्रयोग गर्न सक्दछ - जो कोहीले इन्टरनेट पहुँच गर्न सक्दछन् - जो कोहीसँग DX "सम्पर्क" प्रकारको हुन सक्छ - त्यसैले आत्मविश्वासको स Ham्कट हेम रेडियोले केही बर्षदेखि जित्दै आएको छ।
के यसको मतलब जेलो र IRN लाई मनपर्दो "मान्य" छैन?
के यसको मतलब ह्याम्स बिल्कुलै हुनुपर्दछ छैन यी श्रोतहरू उनीहरूको कलगइनहरू प्रयोग गरेर प्रयोग गर्नुहोस्, किनकि हामी विशेष एमेच्योर ब्यान्डमा प्रसारण गरिरहेका छैनौं, उदाहरणका लागि?
यो रोजाईको बारेमा हो!
मैले सोचेको छु यो निर्भर छ us कसरी व्यक्तिगत हेम्सको रूपमा निर्णय गर्ने we इन्टर्नेट प्रचार को नयाँ रूपहरु को उपयोग गर्न चाहानुहुन्छ।
मैले हालसालै लेखमा भनेझैं,ब्रेक लिदै", मेरो स्थानीय क्लबमा, हामी एक Zello च्यानल स्थापित छ। यो निजी हो, पासवर्ड सुरक्षित र मोडरेट गरिएको छ। तर यो सहि एमेच्योर प्रोटोकोल आदिको साथ कुनै हाम रेडियो च्यानल जस्तै प्रयोग गरीन्छ।
जब नेटवर्क रेडियोहरू (PTT बटनहरूको साथ ह्यान्डहेल्ड SDR कम्प्युटरहरू) को साथ प्रयोग हुन्छ, यो लामो समय हुँदैन जब यो हेम रेडियोको हर तरिकामा "महसुस" गर्दछ।
कसैलाई सोध्नुहोस् जो कुनै एक समय को लागी एक प्रयोग गरीएको छ ... Handhelds मा PTT बटन एक एन्ड्रोइड उपकरण को उपयोग को भावना दूर ले; कसैको हत्केलामा भाग्दो इकाइहरू अन्य कुनै एचटी जस्तै छन्; PTT- शैली कोमले "फोन-जस्तै" भावनाको कुनै आवाश्यकता हटाउँदछ, तर हामी क्रिस्टल-स्पष्ट अडियोको फाइदा सँगै आधुनिक सामाजिक मिडियाको फाइदा लिन सक्छौं, जस्तै सदस्यहरूको फोटो आईडी, (व्यक्तिलाई चिन्नको लागि उत्कृष्ट!) "ओभरहरू" रिप्ले गर्ने क्षमता, मध्यम तरिका र आत्म-पुलिस उचित तरिकामा।
के हाम्रो ज़ेलो समूह "ह्याम रेडियो" हो? यदि तपाईं यसलाई एक एमेच्योर ब्यान्डमा आरएफ उत्पन्न गरेर मात्र परिभाषित गर्नुहुन्छ, तब होईन। तर यो पक्कै छ लाग्छ यो जस्तै…
के त्यहाँ अर्को परिभाषा छ?
२१ औं शताब्दीमा, "एमेच्योर आरएफ" उत्पादन गर्दै छ मात्र हाम रेडियो परिभाषा गर्ने तरिका? Years० वर्ष पहिले उत्तर दिन सजिलो प्रश्न हुन सक्छ - अब, म निश्चित छैन ...
प्रसारको प्राकृतिक प्रकारहरू परम्परागत ह्याम ब्यान्ड र रेडियोहरूको लागि मात्र खुला छन् - समान रूपमा इन्टरनेट प्रचारको नयाँ रूपहरू केवल कम्प्युटरमा आधारित "रेडियो" को लागि मात्र खुला छन्। के यो "पाठ्यक्रमहरूको लागि घोडा" को केस मात्र होइन? तपाईंले प्राप्त गर्न खोज्नु भएको कुराको लागि सही उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्?
हम्स यी उपकरणहरू र प्रसारको इन्टरनेट रूपहरू बीच पार गर्दै खेल्दैछन् भन्ने तथ्य अझ रमाईलो छ!
१ 1990 XNUMX ० दशकको उत्तरार्धमा पहिलो डिजिटल वाणिज्यिक हेम रेडियो बाहिर आएदेखि डी-स्टार र अन्य मोडहरू यस प्रयोगको हिस्सा भएका छन्।
र यो केवल एक शौक हो!
शब्द एमेच्योर ल्याटिनबाट आएको हो "Amare" - प्रेम गर्न।
अर्को शब्दमा, केहि पनि एमेच्योर यसको प्रेमको लागि गरिन्छ। एमेच्योर रेडियो एक शौक हो जुन हामी संलग्न छौं (आशा!) किनभने हामी रेडियोलाई माया गर्छौं सबै यसका फारामहरू।
तर Zello (र IRN) पनि रेडियो को एक रूप हो।
हो, यसले GGHz वा M ०० मेगाहर्ट्झ प्रयोग गर्न सक्दछ, वास्तवमा हामीलाई कुनै पनि समयमा हामी कुन फ्रिक्वेन्सीहरू प्रयोग गरिरहेछौं भनेर थाहा छैन, तर आरएफ is उत्पन्न भइरहेको। (म पाठ्यक्रम को ताररहित उपकरण को उपयोग ग्रहण गर्दै छु!)
अर्को तरिका राख्नुहोस्, यदि मैले जेलोमा सँगी हामसँग १० मिनेटको कुराकानी गरेँ र त्यसपछि म त्यो कुराकानी दोहोर्‍याउँछु शाब्दिक २ मिटरमा १० मिनेटको अर्को सेटको लागि, किन एउटालाई "मान्य" र अर्कोलाई मानिनु हुँदैन?
यदि एक मात्र कुराले यसलाई मान्य गर्दछ कि यो २ मीटरमा छ भन्ने तथ्य हो भने, मलाई लाग्छ हामीले सोध्नु पर्छ कि यदि हामी "विभाजित कपाल" बाट शुरू गरिरहेको छैनौं भने।
यो टेक्नोलोजी हो जसले समस्याहरू निम्त्याएको छ - हामीले विगतमा यस्ता प्रश्नहरूलाई कहिले सम्बोधन गर्नु पर्दैन।
सीबी र 446 XNUMX मेगाहर्ट्ज हाम रेडियोबाट धेरै फरक थिए, तर नयाँ टेक्नोलोजीको आविष्कारले हाम्रो शौकको बारेमा नयाँ (लगभग दार्शनिक) प्रश्नहरू सोधिरहेको छ र टेक्नोलोजीले हामीलाई कहाँ लगिरहेको छ।
यदि तपाईं मेरा लेखहरू नियमित रूपमा पढ्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई थाहा छ मलाई लाग्छ कि यो खराब चीज होइन।
खुला दिमाग राख्नु पक्कै राम्रो कुरा हो? एक बन्द दिमाग शायद कम यति?
तर मलाई हाम रेडियो मन पर्छ!
म गर्छु! I प्रेम यसको सबै रूपहरूमा ह्याम रेडियो - मेरो लागि जेलो / आईआरएन हाम रेडियोको अर्को "फारम" हो, हुनसक्छ एक विशेष सरकार द्वारा विनियोजित हेम ब्यान्डमा नभई सबै उद्देश्य र उद्देश्यका लागि। लाग्छ यो जस्तै।
म निश्चित रूपमा यसलाई पूह-पूह गइरहेको छैन - किनकि किनकि यसले मेरो स्थानीय वातावरणमा प्रति सेकेन्ड निश्चित संख्यामा साइकल पठाउँदै छ। मलाई कसरी रेडियोले कार्य गर्दछ र चीजहरू निर्माण गर्न सिक्न मन पर्छ, तर किन मलाई मेरो ह्याम साथीहरूसँग कुराकानी गर्न र हम प्रोटोकल प्रयोग गरेर, २.2.4 GHz Wifi मार्फत किन रोक्नु पर्छ?
जब म Zello र IRN प्रयोग गर्दछु, म अझै पनि "G7DDN" भइरहेको छु र म तदनुसार ह्याम प्रोटोकोल प्रयोग गर्दछु। म गर्दिन छ हुनसक्छ, तर म गर्छु, विशेष गरी हाम्रो क्लब जेल्लो समूहको आफ्नै घर-नियमहरू छन् जुन हामीले त्यसो गर्नुपर्दछ।
यो इन्टरनेट बिना धेरै सजिलो थियो!
ह्याम ब्यान्डहरू हेम ब्यान्डहरू थिए, प्रसारण ब्यान्डहरू प्रसारण ब्यान्डहरू थिए, नम्बर स्टेशनहरू नम्बर स्टेशनहरू थिए र जैमरहरू जैमरहरू थिए।
अब इन्टरनेट आएको छ र रेडियो अनुभव को पूर्णता को लागि उपलब्ध बनाएर सबै कुरा बर्बाद सबैलाई, प्रसारण रेडियो, जासूस रेडियो, व्यापार रेडियो, आपतकालीन सेवा रेडियो, हबी २-मार्ग रेडियो र अब यो "संक्रमित" हाम रेडियो पनि हो। 🙂
हामीले नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई ध्रुवीकरण हुन दिनुपर्दैन। हामी अझै पनी खडा हुन सक्छौं र "सच्चा" हाम रेडियो प्रयोग गर्न सक्दछौं र साथसाथै नेटवर्क रेडियोहरू अँगालो।
हामी भन्न सक्दछौं, "ठीक छ, यो सीधा ह्याम आरएफ होईन तर यो त्यस्तो चीज हो जुन हामी कार्य गर्न सक्छौं र हाम्रो आफ्नै कार्यहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्छौं।"
शायद अनौंठो क्वार्क यो हो कि, यदि एमेच्योर रेडियो पहिलो पटक इन्टरनेटको वरिपरि भएको थियो भने मलाई आश्चर्य लाग्छ कि मेरो सबैभन्दा राम्रो हेम मित्र र म पनि आज त्यस्तो छलफल गरिरहेको छैन होला!
यो एक विचार हो ...
प्रकाशित अप्रिल 16, 2018 अप्रिल 16, 2018
G जी-मात्र सिम कार्डहरू 4G जी-नेटवर्क नेटवर्क रेडियोमा मात्र प्रयोग गर्दै
केहि G जी सिम कार्डहरूले 4G जी - मात्र रेडियो समर्थन गर्दैन। यदि त्यो केस हो भने, सानो ट्रिक प्रयोग गरेर, तपाईं Android रेडियोलाई सोच्न सक्नुहुन्छ कि यो it जी हो र अझै पनि यसलाई 3G जी मात्र सिम प्रयोग गरेर 4G जी चलाउन अनुमति दिनुहोस्।
यहाँ,--चरण प्रक्रिया छ:
१ - डायल * # * # 1 3646633 # * # * (यसले ईन्जिनियर मेनू प्रविष्ट गर्दछ)
२ - अब चयन गर्नुहोस् प्रेफर्ड नेटवर्क विकल्प
- - ड्रप डाउन सूचीमा तपाईले चयन गर्नु पर्छ 4G LTE / WCDMA / GSM। त्यसो भए, रेडियो बचत र रिबुट गर्नुहोस्।
- - एकचोटि सकियो, पहिलो सिम स्लटमा केवल G जी सिम घुसाउनुहोस् र तपाईं दोस्रो सिम स्लट खाली राख्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको उपकरण अब speed जी गतिमा चल्नेछ, network जी नेटवर्कमा जडित तर G जी-मात्र सिम कार्ड प्रयोग गरेर।
प्रकाशित अप्रिल 6, 2018 अप्रिल 6, 2018
ईस्टर अवधिमा दिनको कामका दबावहरूबाट केहि दिन टाढा भए राम्रो भए।
मेरी श्रीमती र मैले वेल्समा केहि समय बितायौं र हामी घरबाट टाढा रहँदा हामीले गर्न चाहेको केही कार्यहरू गर्यौं। हामीले विशेष गरी सुन्दर पहाडहरू र हिमालहरूको वरिपरि सानो हिंड्ने र ड्राइभि enjoyedको आनन्द उठायौं।
टेक्नोलोजी र आधुनिक जीवन
यसले पाठ्यक्रमको नक्सा प्रयोग गरेर समावेश गर्दछ, विशेष गरी केहि साना पहाड सडकका वरिपरि नेभिगेट गर्न।
यो तब हो जब, मेरो विचारमा म आधुनिक जीवनको "दुविधा" भन्न सक्दछु, जुन तरिकाले मैले उनीहरूलाई हाम्रो ह्याम रेडियोको शौकमा असर गरेको देखेको थिए, मलाई फेरि सोच्न सुरु भयो ...
ठीक छ, मैले क्षेत्रको मेरो ब्रान्ड नयाँ अर्डनेस सर्वेक्षण (युके म्यापि Agency एजेन्सी) कागज नक्शा लिएँ र मैले आफैंलाई एक नयाँ नयाँ सुविधाको सम्झनामा फेला पारें, जुन अगाडिको आवरणमा विज्ञापन गरिएको थियो ...
हो, किनकि मैले कागजको नक्शा किनेको हुनाले, म मेरो आईप्याड र आईफोनका लागि कागज नक्शाको नि: शुल्क मोबाइल डाउनलोड गर्न योग्य भएँ! हो!
म सँधै "कागज-नक्सा" प्रकारको व्यक्ति भएको छु, तर मलाई मेरो निजी कम्प्युटर उपकरणहरूमा म्यापि applications अनुप्रयोगहरू मनपर्दछ, त्यसैले मैले सोचे कि यो राम्रो चीज हुनेछ - र त्यस्तै भयो!
सकारात्मक र नकरात्मक
यो कागजको नक्सा भएको दुबै संसारमा सब भन्दा राम्रो थियो ठ्याक्कै कागजमा तर यसको सट्टामा मेरो ट्याब्लेट स्क्रिनमा ...
मलाई मेरो पढ्ने चश्माको आवश्यकता बिना नक्शामा जूम गर्न सक्षम हुन मन पर्यो।
जिपिएस मार्फत सबै समयमा नक्सामा मेरो स्थान पिन्टपिसन हुनु एकदम राम्रो थियो ...
यो कुरा थाहा पाएर कि नक्शा स्वचालित रूपमा नयाँ भौगोलिक सुविधाहरूसँग अद्यावधिक हुनेछ, जस्तै नयाँ बाइपासहरू र सडकहरू भविष्यका प्रमाण पनि आश्वासनपूर्ण थिए।
कम कूल तथ्य यो थियो कि म कुनै ठूलो विवरणमा मेरो क्षेत्रको ठूलो सिंहावलोकन प्राप्त गर्न सक्दिन किनकि म कागजको नक्सासँग खोल्न सक्छु - बू ...
मलाई लाग्यो कि मलाई लाग्यो कि मेरो कागजको नक्शा कहिले पनि ब्याट्रीबाट चल्दैन!
र जब घाम लाग्यो, कुन चाहिं पढ्न सजिलो लाग्यो?
तर ठुलो रूपमा, नयाँ थप्न एक धेरै सकारात्मक अनुभव थियो र मलाई म सधैं रहन चाहन्छु भनेर विश्वास गर्न नेतृत्व गर्‍यो दुबै म्याप संस्करणहरू जब म बाहिर थिए र भविष्यमा यस बारे, केवल किनभने आईप्याड संस्करण थप अनुभवको लागि केहि चीजहरू जुन मसँग पहिले नै धेरै परिचित थिए।
अब नेटवर्क रेडियोसँग यसको के भयो?
२१ औं शताब्दीमा कसरी प्रविधिले हाम्रो जीवनको लागि समस्या उत्पन्न गरेको यसको अर्को उदाहरण हो। नेटवर्क रेडियोहरू, मेरो लागि अलि अनलाइन नक्सा जस्ता छन् - एक सहायक जसले समग्र अनुभवमा केहि थप गर्दछ, तर आफ्नै आफैंमा पनि खडा हुन सक्छ।
मलाई कागजको नक्शा मन पर्छ, जहिले पनि हुन्छ, सँधै हुनेछ - म RF हाम रेडियोलाई माया गर्छु, सँधै हुनेछ, सँधै हुनेछ
तर अब मलाई मेरो आईप्याड नक्शा पनि हात पार्न मन पर्छ - जस्तो मलाई नेटवर्क रेडियोलाई मेरो रेडियो शाहीको अंशको रूपमा प्रयोग गर्न मन पर्छ।
ती दुबै मेरो शौकलाई बढाउन नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्छन्।
तर यो केवल कागजको नक्शा मात्र हुनुपर्दछ?
यो मूर्खताले यो दृश्यको पालना गर्नु हुनेछ, जबसम्म म सधैं कागजको नक्शा प्रयोग गर्नुहोस्, कि म "सही" नेभिगेट गर्दै छैन!
समान रूपमा, म यो दृष्टिकोण लिने छैन, यदि मैले आरएफ प्रयोग गरिरहेको छु भने, यो निश्चित रूपमा मेरो लागि विशिष्ट ब्यान्डमा हुनुपर्दछ। रमाइलो यसको प्रयोग गर्दै।
हुनसक्छ समस्या तथ्यमा यो छ कि यी सबै व्यस्तताहरू ठीक त्यस्तै छन्, शौकहरू। चीजहरू जुन हामीलाई ल्याउनको लागि हो खुशी.
हो, केहि शौकहरू काम गर्नको लागि आधिकारिक निकायहरूबाट इजाजतपत्र आवश्यक हुन्छ; शुटि,, ड्राइभिंग (निश्चित प्रकारका सवारीहरूको लागि), उड्डयन र रेडियोको केहि प्रकारहरू।
तर यकिन छ कि २१ औं शताब्दीमा टेक्नोलोजीले गरेको सबैभन्दा ठूलो कुरा हामीलाई अरू नै हो विकल्प बारेमा कसरी हाम्रो शौक पछ्याउन।
अनलाइन नक्शाले मेरो लागि नेभिगेट गर्ने काम गर्दछ, जसरी नेटवर्क रेडियोले मेरो रेडियो शौकको लागि गर्छ।
र यो हाम्रो सम्भवतः हाम्रो ठूलो ह्याम रेडियो हबीको साथ संघर्ष गरिरहेको हुन सक्छ।
तपाइँ आफ्नो शौक के हुन चाहानुहुन्छ?
तपाईं हेर्नुहोस्, अब हामीसँग रेडियोलाई शौक बनाउन टेक्नोलोजी छ we यो को लागी हुन चाहन्छ आफैले। हामी यसलाई केमा आकार दिन सक्छौं we यो हुन र गर्न को लागी us.
यसको मतलब हामी २० मिनेटमा DX लाई पछ्याउन सक्छौं यदि हामी चाहन्छौं भने; हामी hour 48 घण्टा प्रतियोगितामा भाग लिन सक्छौं यदि हामी चाहन्छौं भने; तर हामी रेडियो मार्फत सामाजिक समुदाय निर्माणको लागि आईआरएन पनि प्रयोग गर्न सक्दछौं, बरु भर्खरै गठन गरिएको DigiCommCafé IRN समूहले जस्तै गर्न कोशिस गरिरहेको छ। यदि हामी चाहन्छौं भने।
यो त्यस्तो होइन कि एक किसिमको रेडियोले अर्कोलाई ओझेलमा पार्दछ, यो त्यो हो पूरै एक अर्को, यो भन्दा अनलाइन नक्शा कागज एक पूरक।
मेरो स्थानीय रेडियो क्लबसँग यसको निजी निजी जेलो समूह छ - केवल भुक्तान गरिएको सदस्यहरू मात्र यसमा सामेल हुन सक्छन्, तर नियमहरू कि हामी मा निर्णय छ, के हामीसँग हाम प्रोटोकलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो मध्यम र केहि डिग्री नियन्त्रणमा छ। तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ कि हामी केवल प्रयोगकर्ताहरू होइन तर इजाजतपत्र अधिकारको बराबर हो! 🙂 यो बाटो हो we यो काम गर्न चाहन्छु।
गैर-इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेहरूसँग "क्लब कलइग्इन" हुन सक्छ, जुन उनीहरूले आफ्नो हाम कल नभएसम्म प्रयोग गर्दछन्। तिनीहरू साथीहरूमाझ भएको वातावरणमा सुरक्षित रूपमा ह्याम रेडियो प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्न सक्दछन् र अन्य हम्सलाई असर नगरीकन गल्ती गर्न सक्छन्।
हो यो बन्द छ, हो यो निजी हो, तर हामी प्रयोग गरेर रमाईलो गरिरहेका छौं पक्षहरू हाम रेडियोको फरक तरीकाले - त्यो we प्रयोग गर्न चाहन्छ र को लागी काम गर्दछ us.
यो पनि धेरै लोकप्रिय darned लोकप्रिय छ!
अलि बढी विस्तार गर्दै, हामी नियम र नियमहरू द्वारा यति बाधा हुनुपर्दैन कि प्रासंगिक थियो जब शौक अस्तित्वमा आए।
नेटवर्क रेडियोहरूले इयोनोस्फेरिक प्रसार होइन, इन्टरनेट प्रचारको प्रयोग गर्दछ - तिनीहरूलाई इजाजतपत्र आवश्यक पर्दैन किनकि इन्टरनेट सबैका लागि खुला छ। (सर्टवेभ ट्रान्समिटरहरू अवश्य पनि, आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन प्रयोग गर्नुहोस् र लाईसेन्स चाहिन्छ किनकि प्रयोगकर्ताहरूले वातावरणमा आरएफको त्यस्ता प्रकारहरू सुरूवातको प्रभाव बुझ्नुपर्दछ)
तर हामी अझै यी उपकरणहरूसँग रमाइलो गर्न सक्छौं र बढ्ता हम्सहरूले गरिरहेछन्।
केही तिनीहरूलाई अन्त-देखि-अन्त मात्र प्रयोग; अरूले ईन्टरनेट लिंकमा ह्याम ब्यान्डको अंशको रूपमा प्रयोग गर्छन्; केहीले तिनीहरूलाई टाढैबाट नियन्त्रण र PTT मा तिनीहरूको टाढाको HF ट्रान्सीभरहरू प्रयोग गर्दछ।
जुनसुकै तरिकामा, नेटवर्क रेडियोहरू सबै पृष्ठभूमिका रेडियो उत्साहीहरूको लागि एक धेरै उपयोगी उपकरण बन्ने देखिन्छ।
यसलाई दस्तक दिन वा यसलाई विघटन गर्न धेरै नै सजिलो छ - तर सायद तपाईंले वास्तवमै पहिले त्यस्तो उपकरणको प्रयास गर्नु पर्छ, त्यसो गर्नु अघि?
तपाईं हाम्रो खुशीको साथ उनीहरूले हाम्रो ठूलो शौकमा गर्न सक्ने उन्नतिमा सुखद आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ।
अनलाइन नक्शा कसैलाई?
© क्रिस G7DDN - अप्रिल २०२
प्रकाशित अप्रिल 5, 20183सक्छ, 2018
Inrico TM-8 मा माइक लाभ कसरी बढाउने
यसले Inrico TM-8 को खराब माइक्रोफोन अडियोको केहि रिपोर्टहरू सुधार गर्दछ
सँग रेडियो अपग्रेड गर्नुहोस् यो फर्मवेयर र पछ्याउनुहोस् यी निर्देशनहरू। यसले "झरना" आवाज हटाउनेछ। त्यसो भए, तपाईले यस्तै लाभ बढाउन सक्नुहुन्छ:
"फोन" अनुप्रयोगमा जानुहोस् र डायल गर्नुहोस्: * # * # 3646633 XNUMX # * # *
यो ईन्जिनियर मेनू मा प्रवेश गर्दछ
त्यसपछि शीर्ष बारलाई "हार्डवेयर परीक्षण" मा स्लाइड गर्नुहोस्।
अडियो, सामान्य मोडमा जानुहोस् र "माइक" मा प्रकार परिवर्तन गर्नुहोस्।
स्तर Choose छनौट गर्नुहोस् र २4 मा मान समायोजित गर्नुहोस् त्यसपछि "सेट" मा क्लिक गर्नुहोस्।
यो मेरो लागि काम गरेको छ। केही अडियोफाइलहरूले भने कि माइक्रोफोन इलेक्ट्रेट क्याप्सुल प्रतिस्थापित पछि परिणाम अझ राम्रो थियो।
र तिमी गरौ!